Ivermectin 1% + Closantel 10% tsindrona - China Chongqing Fangtong
Ivermectin 1% + Closantel 10% tsindrona
Bika Aman 'endrika Izany dia metaly mamirapiratra ny brownish mavo mazava rano. Fifehezan ml tsirairay dia ahitana: Ivermectin 10mg, Closantel: 100mg. Famantarana Fa ny fitsaboana ny hafa firenena trematode (fluke) sy ny nematode na arthropod infestations noho ny tsinay roundworms, lungworms, eyeworms, warbles, koroka Sy ny moka teny amin'ny biby fiompy. Tsinay roundworms Ostertagia ostertagi (anisan'izany ny OMpiara-larval dingana), Ostertagia lyrata (olon-dehibe), Haemonchus placei (olon-dehibe sy matotra), Trichostrongylus axei (olon-dehibe sy ny ...
Izany dia metaly mamirapiratra ny brownish mavo mazava rano.
Ml tsirairay dia ahitana: Ivermectin 10mg, Closantel: 100mg.
Fa ny fitsaboana ny hafa firenena trematode (fluke) sy ny nematode na arthropod infestations noho ny tsinay roundworms, lungworms, eyeworms, warbles, koroka Sy ny moka teny amin'ny biby fiompy.
Ostertagia ostertagi (anisan'izany ny OMpiara-larval dingana), Ostertagia lyrata (olon-dehibe), Haemonchus placei (olon-dehibe sy matotra), Trichostrongylus axei (olon-dehibe sy matotra), Trichostrongylus colubriformis (olon-dehibe sy matotra), Cooperia oncophora (olon-dehibe sy matotra), Cooperia punctata ( olon-dehibe sy matotra), Cooperia pectinata (olon-dehibe sy matotra), Oesophagostomum radiatum (olon-dehibe sy matotra), Nematodirus helvetianus (olon-dehibe), Nematodirus spathiger (olon-dehibe), Strongyloides papillosus (olon-dehibe), Bunostomum phlebotomum (olon-dehibe sy matotra), Toxocara vitulorum ( olon-dehibe), Trichuris spp.
Dictyocaulus viviparus (olon-dehibe sy ny dingana faha-4 olitra).
Aty Fluke (trematodes)
Fitsaboana ny fluke amin'ny 12 herinandro (matotra)> 99% mandaitra.
Fitsaboana ny fluke amin'ny 9 herinandro (tara tsy matotra)> 90% mandaitra.
Cattle grubs (katsentsitra dingana)
Mange Ny koroka
IVERTEL tsy mety amin'ny intravenous na intramuscular ampiasaina.
Avermectins dia mety tsy ho tsara amin'ny rehetra leferina-kendrena tsy karazana (tranga tsy fandeferana amin'ny mahafaty vokany
no voalaza ao amin'ny alika indrindra fa Collies, Bobtails, Old English Sheepdogs sy mifandray miteraka, na lakroa,
ary koa ao amin'ny sokatra / sokatra).
Aza ampiasaina amin'ny toe-javatra ny fantatra hypersensitivity ny mpanao sakafo.
Aza hitantana chlorinated concomitantly amin'ny zavatra simika. Ny vokatry ny bohiny agonists dia Nitombo ivermectin.
SPECIAL fepetra mba hampiasaina
Fatrany mihoatra ny 10ml tokony nampidirany amin'ny toerana roa samy hafa, mba hampihenana ny mandalo mahazo aina na ny fanehoan-kevitra tao amin'ny tsindrona toerana.
Tsy tokony hatao hitantana ny vokatra, rehefa lineatum Hypoderma olitra no voafaritra ao amin'ny faritra periaesophagic, na rehefa bovis Hypoderma olitra no toerana ao amin'ny hazondamosina lakandrano. Mitadiava torohevitra matihanina fitsaboina momba ny biby mba hamantarana ny fotoana tsara indrindra ny fampiasana.
Levitra SY ADMINISTRATION ROUTE
1 ml isaky ny 50 kg. vatana lanja, mitovy amin'ny 200 mcg / kg Ivermectin sy 2 mg / kilao Closantel.
Single fatrany ny 4.0 mg / kilao ivermectin (20 heny ny soso-kevitra levitra) itantanana subcutaneously, hiteraka ataxia sy ny fahaketrahana. Tsy misy fanefitry efa fantatra. Symptomatic fitsaboana Mety ho mahasoa.
Famantarana overdosage ny Closantel Mety ho tafiditra amin'izany fahaverezan'ny komana, nihena ny fahitana, hoe: Vahao faeces ka nitombo matetika ny defaecation. Fatrany avo dia mety hahatonga fahajambana, hyperventilation, hyperthermia, ankapobeny fahalemena, inco-fanokanana, nifanintontsintona, tachycardia sy amin'ny toe-javatra tafahoatra ny fahafatesana. Fitsaboana ny overdosage dia toy ny tsy misy fanefitry symptomatic efa fantatra.
fanesorana NANOMBOKA TEO
Hena: 35 andro.
Tsy avela ho an'ny biby fiompy ampiasaina amin'ny famokarana ronono ho an'ny olombelona fanjifàna.
Aza ampiasaina amin'ny tsy lactating ronono anisan'izany ny ombivavy bevohoka heifers izay natao mba hamokarana ronono
ho an'ny olombelona ao anatin'ny 60 andro fihinanana ny andrasana parturition.
Aza mampiasa closantel-misy vokatra nandritra ny fe-potoana 35 andro fanesorana.
Ao amin'ny 50ml na 100ml tavoahangy.
Voatahiry ao amin'ny mangatsiatsiaka, maina sy toerana maizina.
Next: ivermectin tsindrona 1%